Sports – Nepal Reports
Sports updates and news.
नेपाल म्यानमारसँग भिड्दै
LeaveaComment / Sports / By Jamin Rai
काठमाडौँ, ५ असोज एफसी यू–१६ महिला फुटबल च्याम्पियनसिप छनोटमा नेपाल आज म्यानमारसँग भिड्दैरछ । हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा नेपाल र म्यानमाबीचको खेल दिउँसो ३ः३० बजे हुदैछ । समूह चरणको पहिलो खेलमा बुधबार फिलिपिन्ससँग ४–० ले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउन नेपाललाई …
नेपाल म्यानमारसँग भिड्दैRead More »
असोज १३ देखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग
काठमाडौँ । यही असोज १३ गतेदेखि शुरु हुने शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलको उद्घाटन खेल न्युरोड टिम एनआरटी र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच हुने भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)द्वारा गठित लिग कमिटीले आज एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको खेल तालिकाअनुसार उद्घाटन खेल सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा असोज …
असोज १३ देखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगRead More »
इतिहास रच्ने नेपालको लक्ष्य नेपालकाे, नेपाल माल्दिभ्ससँग भिड्दै
काठमाडौँ । साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत खेलमा पहिलो पटक उपाधी जितेर इतिहास रच्ने दाउमा रहेको नेपाल रहेकाे छ। अाज हुने सेमिफाइनल खेलमा नेपालले माल्दिभ्सको सामना गर्दैछ । साफमा नेपालले अहिलेसम्म माल्दिभ्सलाई हराउन सकेको छैन। समूहमा भने माल्दिभ्सले तीन टिम मात्र भएको समूहमा कुनै खेल जित्न सकेन भने कुनै गोल नै नगरी अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो। नेपाल …
इतिहास रच्ने नेपालको लक्ष्य नेपालकाे, नेपाल माल्दिभ्ससँग भिड्दैRead More »
सन्दीपले खेल्दैछन् अफगानिस्तान प्रिमियर लिग
नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछानेले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अफगानिस्तान प्रिमियर लिग (एपिएल) खेल्ने भएका छन् । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल), क्यान्डाको ग्लोबल टी–२० र वेस्ट इण्डिजको राष्ट्रिय लिग खेलिसकेका सन्दिपलार्इ आइतबार भएको खेलाडी छनोटमा उनलाई नङराहार टोलीले छनोट गरेको हो । लिगमा पाँच टोली सहभागी हुनेछन् । सन्दीप रहेको टोलीमा आन्द्रे …
सन्दीपले खेल्दैछन् अफगानिस्तान प्रिमियर लिगRead More »
नेपाल र माल्दिभ्सकाे भिडन्त बुधबार
२५ भदौ हाल जारी साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल र माल्दिभ्स बिच खेल हुदैछ । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा जारी उक्त खेल बुधबार हुदैछ । माल्दिभ्स समूह ‘बी’को उपविजेता भएपछि नेपालसँग भिडन्त परेकाे हाे । समूह ‘ए’बाट नेपाल विजेता बन्दै सेमिफाइलन प्रवेश गरेको हो । त्यसैगरी भारत समूह ‘बि’ को विजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । भारतले समूह ‘ए’को …
नेपाल र माल्दिभ्सकाे भिडन्त बुधबारRead More »
शालाहले रुँदै किभको ओलम्पिक रङ्गशाला छाडेका थिए ! तर अहिले !!!
LeaveaComment / Sports / By Ajay Tamang
असार १, एजेन्सी । इजिप्टेलीहरुले रामोसलाई सामाजिक सञ्जालमा सरापे । शालाहले रुँदै किभको ओलम्पिक रङ्गशाला छाडे लगतै इजिप्टेली ट्वीटरमा अरबिक ह्यासट्याग “रामोस कुकुर” र “र**को छोरा” टे«ण्डिङ्ग भएको थियो । शालाहलाई “भौतिक र मनोवैज्ञानिक चोट” पु¥याएको भन्दै एक इजेप्टेली वकिलले रामोश माथि ८७.४ करोड अमेरिकी डलरको मुद्दानै हालेका छन् । देशवासीको लागि शालाहको जादु मैदानमात्र …
शालाहले रुँदै किभको ओलम्पिक रङ्गशाला छाडेका थिए ! तर अहिले !!!Read More »
विश्वकप अनि मेस्सी र रोनाल्डो
जेठ ३१, विश्व फुटबलमा लियोनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको सबैभन्दा बढी चर्चामा रहने खेलाडीहरु हुन् । विश्वका प्रमुख खेलाडीको रुपमा लामो समयदेखि आफ्नो राम्रो छाप छाड्दै आएका यी दुवै खेलाडीका लागि यो चौथो विश्वकप हो । यो महिना यी दुई खेलाडीको प्रदर्शनमा धेरैको आँखा पुग्नेछ । उनीहरुले विश्वकपमा अहिलेसम्म गरेको प्रदर्शन यस्तो छ – यी …
विश्वकप अनि मेस्सी र रोनाल्डोRead More »
विश्वकप फुटबल को अघिल्लो दिन किन बर्खास्त भए जुलेन
LeaveaComment / News, Sports / By Ajay Tamang
जेठ ३१, विश्वकप फुटबल को अघिल्लो दिन स्पेनले प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगीलाई बर्खास्त गरेको छ । स्पेनले १ असारमा पोर्चुगलसँग पहिलो खेल खेल्दैछ । तर, त्यसअघि प्रशिक्षक बर्खास्तीमा परेका हुन् । स्पेनिस फुटबल फेडेरेसनले पत्रकार सम्मेलन गरी ५१ वर्षीय लोपेटेगीलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गरेको हो । संघलाई कुनै जानकारी नदिई रियल मड्रिडसँग सम्झौता गरेकाले लोपेटेगीलाई बर्खास्त गरिएको …
विश्वकप फुटबल को अघिल्लो दिन किन बर्खास्त भए जुलेनRead More »